ओरल सबम्युकस फाइब्रोसिस : दक्षिण एसियाली मानिसमा देखापर्ने विशेषप्रकारको मुख समस्या – Health Post Nepal
२०७६ भदौ १७ गते १४:३६
ओरल सबम्युकस फाइब्रोसिस (ओएसएमएफ) दक्षिण एसिया क्षेत्रमा देखापर्ने विशेषखाले मुखको समस्या हो । पछिल्लो समय यो रोग यो क्षेत्रमा जटिल स्वास्थ्यसमस्याका रूपमा देखापर्न थालेको छ । यो रोग लागेपछि प्रारम्भिक अवस्थामै निदान भई उचित उपचार पाएको अवस्थामा बाहेक बिरामीलाई पुरानो अवस्थामा फर्काउन वा रोग निर्मूल गर्न सकिँदैन ।
ओएसएमएफ प्रि–क्यान्सरस कन्डिसन हो, अर्थात् समयमै उपचार तथा रोकथाम गरिएन भने यो रोग क्यान्सरमा परिणत हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । तसर्थ, समयमै यसको उपचार र रोकथाममा सजग हुनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । यो रोग लागेमा मुख खोल्न गाह्रो हुने, मुखको खोलाइ कम हुने, चिल्लो–तातो तथा मसालेदार खानेकुरा खाँदा मुख पोल्नेजस्ता लक्षण देखिन्छन् ।
के कारण हुन्छ ओएसएमएफ ?
यो रोग बेटल नट्स अर्थात् सुपारी तथा सुपारीजन्य पदार्थ, जस्तै, पान, गुट्खाको सेवन, रातो खुर्सानीको अत्यधिक सेवन, पोषणयुक्त खानेकुराको कमी तथा वंशानुगत कारणले हुने गर्छ । विशेषतः यो रोग बेटल नट्समा पाइने एरिकोलिन नामक केमिकलले मुखमा हुने कोलाजन नामक मासुमा पाइने फाइबरलाई अत्यधिक वृद्धि गराइदिनाले हुन्छ ।
यो रोग प्रायः २० वर्षमाथि उमेरसमूहका मानिस पाइन्छ । यो रोग अधिकतर महिलामा पाइएको छ । यो रोगले गलाको मासु, घाँटी (फ्यारिंग्स र ओइसोफ्यागस), जिब्रो, ओठलाई असर गर्छ ।
यो रोग लागेपछि मुख्यतः मसालेदार खाना खाँदा मुख पोल्ने, गलाको मासु (बकल म्युकोजा) मा स–साना फोका तथा घाउ हुने, मुखमा र्यालको मात्रा कम वा अत्यधिक हुने, मुख कम खुल्ने, गलाको मासु छाम्दा फाइब्रस ब्यान्ड अर्थात् मासुको ढिक्काजस्तो देखापर्ने, खाना निल्न गाह्रो हुने, खानाको स्वाद थाहा पाउन नसकिनेजस्ता लक्षण देखापर्छन् ।
यो रोग लाग्न नदिन के गर्न सकिन्छ ?
– सुपारी तथा सुपारीजन्य पदार्थ जस्तै, गुट्खा, पानलगायतको सेवन नगर्ने ।
– रातो खुर्सानीको सेवन कम गर्ने ।
– पोषणयुक्त खानेकुराहरू खाने ।
– समय–समयमा दन्तचिकित्सकसित परामर्श गर्ने ।
यो रोगको सुरुमै पहिचान भई दन्तचिकित्सकको सल्लाहबमोजिम गरेमा पूर्ण रूपमा निको पार्न सकिन्छ । तर, समयमा रोगको पहिचान हुन नसकेमा वा रोग पहिचान भएपछि पनि हेलचेक्य्राइँ गरी चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम समयमै उपचार नगरेको खण्डमा रोगमाथि पूर्णतः जित हासिल गर्न सकिँदैन ।
यो रोगको सबैभन्दा सरल र असरदार उपचार भनेको भाविष्यमा कहिल्यै सुपारी र सुपारीजन्य पदार्थको सेवन नगर्नु नै हो । यस्ता पदार्थको सेवन आजैबाट बन्द गर्नु नै सर्वोत्तम विकल्प हो । साथै, भिटामिन बी कम्प्लेक्स तथा पोषणयुक्त खानेकुराको सेवनले पनि यो रोगलाई निको पार्न मद्दत पुग्दछ । त्यसैगरी, दूधमा बेसार मिलाएर गालाको भित्री भागको भित्तामा (मुखभित्र) लगाउनाले पनि बिरामीलाई राहत मिल्ने विशेषज्ञ चिकित्सकहरुले बताउँदै आएका छन् । फिजियोथेरापी, बेस्सरी मुख खोल्न कोसिस गर्ने, मुखमा चारवटा औँला पसाई मुख तन्काउनेजस्ता मुखका व्यायामले पनि यो रोग केही हदसम्म ठिक गर्न सकिन्छ ।
यदि यो रोग जटिल बन्न पुगेको अवस्था छ भने इन्ट्रालिजनल इन्जेक्सन अर्थात् घाउ भएको ठाउँमा सुई दिनु आवश्यक हुन्छ । यस्तोमा दन्तचिकित्सकले कर्टिकोस्टेरोइड र हेलुरोनिडेडजस्ता केमिकलयुक्त इन्जेक्सन प्रयोग गर्छन् । यदि मुखखोलाइ अत्यन्त कम छ भने सर्जरी गरेर मासुको ढिक्का निकाल्नुपर्ने हुन सक्छ ।